Ifektri ye-Fish Collagen Peptide - Abakhiqizi base China Fish Collagen Peptide, abahlinzeki
I-oligopeptide yezinhlanzi zasolwandle ingumkhiqizo osetshenzwe ngokujulile we-deep sea fish collagen, inezinzuzo ezihlukile ekudlaleni nasekusebenziseni. Iningi lazo ama-molecule amancane ahlanganiswe ne-peptide aqukethe ama-amino acid angama-26 anesisindo samangqamuzana esingu-500-1000dalton. Ingamunzwa ngqo ngamathumbu amancane, isikhumba somuntu, njll. Inezici ezinamandla zokudla okunempilo nokusetshenziswa okubanzi.
IHainan Huayan Collagen Technology Co., Ltd ikhiqiza amathani ayi-4,000 wekhwalithi ephezulu yezinhlanzi i-collagen peptide minyaka yonke, i-fish collagen (i-peptide) inqubo entsha ye-enzymatic hydrolysis eyadalwa yinkampani yakwaHuayan, esebenzisa izinto ezingenazo ukungcola kwezikali nezikhumba . Uma kuqhathaniswa ne-acid-base hydrolysis yendabuko ye-collagen, inqubo ye-enzymatic hydrolysis yenkampani yethu inezinzuzo eziningi: Okokuqala, ngoba izimo ze-enzymatic hydrolysis zivame ukuba mnene, ngeke kube khona ukwehluka kwesakhiwo se-molecule futhi akukho ukuvalwa kwezingxenye ezisebenzayo. Okwesibili, i-enzyme inendawo yokulungisa indawo, ngakho-ke ingalawula isisindo se-molecule ye-hydrolyzed collagen futhi ithole ama-hydrolysates ngokusatshalaliswa kwesisindo semolekyuli. Okwesithathu, ngoba i-asidi ne-alkali ayisetshenziswa kwinqubo ye-enzymatic hydrolysis, inqubo ye-enzymatic hydrolysis ayisebenzisi imvelo futhi ayingcolisi imvelo.